साउनमा नभए मंसिरमा हुन्छ तर नेविसंघ महाधिवेशन भएरै छाड्छ -अध्यक्ष महर – SamajKhabar.com
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ३१ असार २०७५, आईतवार ०२:१२
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ सधै विवादको केन्द्रका रुपमा रहेको छ । नेविसंघको वतर्मान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन एक महिनामात्रै बाँकी छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय नेविसंघमा सधै चुनौतीको रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । नेविसंघभित्र समानान्तर गतिविधि बढ्दै जाँदा महाधिवेशनको मिति पनि २ पक्षले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेविसंघ कसरी अगाडि बढ्ला । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिहं महरसंग गरिएको विशेष कुराकानी समाज संवादमा ।
नेपाल विद्यार्थी संघ अहिले के गर्दैछ ?
नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान कार्यसमिति आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेको छ । नेविसंघको विधान अनुसार गत असोजमा बसेको केन्द्रीय समितिको म्याण्डेड अनुसार यही साउन २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म नेविसंघको महाधिवेशन गर्दैछौं । त्यसका लागि नियमावली बनाउनेदेखि अन्य सांगठनिक जिम्मेवारीहरु पूरा गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्य विपक्षी दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस भएकाले सडकको नेतृत्व अहिले नेविसंघले नै गरेको छ । महाधिवेशनको तयारीसंग सरकारको अधिनायकवादको विरुद्धमा हामी सक्रिय छौं ।
तपाईले भनेको साउन २३ मा नेविसंघको एउटा महाधिवेशन उद्घाटन हुन्छ की दुईवटा ? अर्को पक्षले पनि समानान्तर महाधिवेशन घोषणा गरेको छ नि ?
हेर्नुस् अध्यक्ष संगठनको नेता हो । मैले गरेका काममा असहमति भयो वा गलत लाग्यो भने चुनौती दिन वैधानिक संरचनाहरु छन् । नेविसंघको वैधानिक मञ्चलाई लत्याएर कसले कहाँ के गर्छ त्यसको जिम्मा लिन सकिदैन ।
नेविसंघ केन्द्रीय समितिका १ सय ५१ जनाले १ सय ५१ थरी कुरा र प्रचार गर्न सक्छन् । तर मुख्य कुरा संगठनको निर्णय के छ भन्ने हेर्नुपर्छ । नेविसंघको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको तयारी थालिसकेको छ । यसलाई प्रभावित पार्न केही साथीहरु लागिरहनुभएको छ । आफ्नो भन्दापनि पार्टीकै केही नेताहरुको उक्साहटमा उहाँहरु लाग्नुभएकोछ । गलत बाटो हिडेका साथीहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु, उहाँहरु गलत बाटोमा हिडेपनि संगठनले आफ्नो बाटो बिर्सेको छैन । लाखौं नेविसंघ कार्यकर्ताको मनोभावना अनुसार हामी अघि बढेका छौं ।
नेविसंघको भावना भन्नुहुन्छ तर समस्या तपाईकै समूहमा छ । हिजो आफूसंग मिलेर चुनाव लड्दा राम्रो आज सहमति राख्दा नराम्रो ?
हेर्नुस् चुनावका बेला एलायन्स हुन्छ । चुनाव जित्नका लागि सहकार्य हुनु गलत होइन । मुख्य कुरा संगठनलाई अघि बढाउदा सहकार्य भयो वा भएन भन्ने हो । नेविसंघमा विवाद आज भएको होइन । नेविसंघको फोरमबाट नेता भएर पार्टीमा पुगेका पाकादेखि युवा नेता सबैलाई थाहा छ विवाद के हो भन्ने । उहाँहरुले नै मलजल गरेर नेविसंघमा विवाद देखिएको हो । मैले नेतृत्व पाउदै गर्दा एउटा प्वाल परेको रुमालको रुपमा नेविसंघ रहेको थियो । त्यसलाई सिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु । केही साथीहरु त्यसलाई च्यात्न लागिपर्नु भएको छ । यो प्रयास सफल हुँदैन ।
बहुमत एकातिर तपाई अर्कैतिर भन्ने छ नि ?
बहुमत हुनेले लुकेर हिड्दैन । नेविसंघको वैधानिक संरचना, केन्द्रीय समितिको बैठकमा आएर बहुमत देखाउँदा हुन्छ । मेरो विरुद्धमा बहुमत साच्चिकै पुगेछ भने सोचौला नत्र केन्द्रीय समितिको बैठक बहिस्कार गरेर हिड्ने । चोक चौतारोमा कसले बहुमत पुर्याउछ त्यसले अर्थ राख्दैन । नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा केही सिमित साथीहरु केही पार्टी नेताको उक्साहटमा लागेको विषय बहुमतसंग जोडिदैन । नेविसंघ अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छ र यो महाधिवेशन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।
महाधिवेशन समयमै भएन भने के गर्ने ?
त्यस्तो अवस्था अहिले नसोचौं । सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्री लगायत सबै नेतासंग मैले कुरा गरेको छु । पार्टीका नेताहरु खासगरी नेविसंघको ब्याकग्राउण्ड भएका युवा नेताहरुले जिम्मेवारीबोध गर्नुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ । सबै पक्षसंग सहमति गराएर साउन २३ मा महाधिवेशन हुन्छ । नत्र विधानअनुसार ३ महिना म्याद थपेर भएपनि मंसिरमा महाधिवेशन हुन्छ । त्यो पनि भएन भने संगठनलाई क्षति हुन्छ । त्यो अवस्थ आउन म दिन्न । सबै साथीहरुले संगठनप्रतिको जिम्मेवारी मनन गरेर कठिन परिस्थितिलाई रोक्न लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
३१ असार २०७५, आईतवार ०२:१२ मा प्रकाशित